ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပညာရေးကို မိမိနိုင်ငံနဲ့မဝေးတဲ့စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ လေ့လာတက်ရောက်ချင်တဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအတွက်
Feb 14, 2020 Phone Letyar globalnews2020, globalscholar_2020, News
Global Education Fair 2020 Free Reg: https://bit.ly/crownedu_global_2020 Feb 22 : Novotel Hotel, Pyay Room Feb 23: Mandalay Convention Center ❑ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပညာရေးကို မိမိနိုင်ငံနဲ့မဝေးတဲ့စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ လေ့လာတက်ရောက်ချင်တဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအတွက် - . ❑ (၂၄)နာရီ လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သင့်တင့်မျှတမှု၊ . ❑ USA-UK-Australiaရှိ Rankingမြင့်တက္ကသိုလ်ကြီးများမှ ချီးမြှင့်သည့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Bachelor/Master Degreeများကို အချိန်တိုအတွင်း ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ရယူနိုင်မှု၊ . ❑ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်သွားလာရလွယ်ကူသောနေရာတွင်ရှိပြီး Culture Shockဖြစ်နိုင်ချေနည်းပါးမှု ...
HNDလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေ အတွက်ယူကေရှိ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်(၆)ခု
Feb 13, 2020 Phone Letyar globalnews2020, News
Global Education Fair 2020 Free Reg: http://bit.ly/GLOBAL2020 Feb 22 : Novotel Hotel, Feb 23: Mandalay Convention Center . ❑ နိုင်ငံတကာ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အစဉ်အဆက် ဂုဏ်သတင်းကြီးတဲ့ ယူကေပညာရေးနဲ့ယူကေထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်ကြီးတွေဆိုတာ မြန်မာကျောင်းသားတွေ ငယ်စဉ်ထဲကမက်ခဲ့ကြရတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ . ❑ ပြည်တွင်းမှာ HND Level 5လက်မှတ်ကိုင်ထားပြီး ကျန်တဲ့တစ်နှစ်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်လည်းသက်သာရမယ်... ရမယ့်ဘွဲ့ဒီဂရီ Rankingကလည်း ကောင်းရမယ်...(၅ဝ%)ပညာသင်ဆုနဲ့လည်းသင်ကြားခွင့်ရမယ်...ကျောင်းတစ်နှစ်တက်ပြီးရင် မြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းတန်းပြန်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲဆက်လက်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ခွင့် ...
ARE YOU ELIGIBLE TO APPLY FOR SCHOLARSHIPS?
Feb 07, 2020 Phone Letyar News
ARE YOU ELIGIBLE TO APPLY FOR SCHOLARSHIPS? ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ [Registration: http://bit.ly/crown_scholarships_info] . ■ “CROWN Education’s Scholarship Info 2020”မှာ အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီး လက်ရှိ နိုင်ငံတကာမှပေးအပ်ချီးမြှင့်နေတဲ့ပညာသင်ဆုများအနက် ဘယ်ပညာသင်ဆုကကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမှု အရှိဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာကို အချိန်တိုအတွင်းပြန်လည်သိရှိနိုင်ပါပြီ... . ■ CROWN Educationအနေဖြင့် ...